က Man ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများ၏အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကျွန်း
က Man Corporation ၏ကျွန်း
က Man ၏ကျွန်းမကြာခဏ "မန်း" ဟုခေါ်၏, မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်နှင့်အင်္ဂလန်တို့အကြားအိုငျးရစျပင်လယ်မှာတည်ရှိပါတယ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်ကိုလည်းဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကကိုယ်စားပြုထားတဲ့မန်း၏သခင်အဖြစ်လူသိများပြည်နယ်၏၎င်း၏ဦးခေါင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအင်္ဂလိပ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုမှီခိုသည်။ ဗြိတိသျှအစိုးရက Man ၏ကျွန်း၏ကိုယ်စားအပေါ်စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးပေးပါသည်။ အင်္ဂလိပ်က၎င်း၏မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
က Man ၏ကျွန်းရောနှောဗြိတိန်နှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုများအတွက်ရေပန်းစားအခွန်ဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ 1931 အထိအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော 1993 ၏ကုမ္ပဏီများ Consolidated အက်ဥပဒေ, က Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းနှင့် ပတ်သက်. မူလတန်းတရားပေတည်း။ ဤပညတ်တရားအားလုံးဒါရိုက်တာများ၎င်း၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှင့်ရုံးခန်းလိပ်စာများ၏အမည်များအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းမည်အကြောင်းလိုအပ်သည်။ သို့သော်အမည်စာရင်းတင်သွင်းကော်ပိုရိတ်ပိုင်ရှင်များ '' လျှို့ဝှက်ပေးခန့်အပ်ထားသောနိုင်ပါသည်။
က Man ၏ကျွန်းအောက်ပါတို့အပါအဝင်ထည့်သွင်းဖို့ကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုကမ်းလှမ်း:
• အဘယ်သူမျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်: က Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်း၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်မျှမကော်ပိုရိတ်အခွန်ရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အမေရိကန်နှင့်သူ၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်ကောက်နေကြသည်အခြားနိုင်ငံများ၏နိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များထံက Man ဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့ကျွန်းကြေညာရပါမည်။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: က Man ၏ကျွန်းများတွင်မျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက်ရှိနေသည်။ အတော်များများကကော်ပိုရေးရှင်းရုံသူတို့ရဲ့မြို့တော်အဖြစ်နှစ်ခု pence Sterling ကြေညာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
• ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာ: အဆုံးစွန် privacy ကိုများအတွက်က Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းသောသူဆောင်လုလင်ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးအဓိပ်ပာယျ "ဆောင်လုလင်" ထက်အခြားကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာလက်မှတ်များမနာမည် "ဆောင်လုလင်" အစုရှယ်ယာများကိုထုတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အမှန်တကယ်ပိုင်ရှင်ဆောင်လုလင်ရှယ်ယာသူသည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှတ်တမ်းများရှိနေကြသည်မဟုတ်။
• လူပျိုရှယ်ယာရှင်များ: သာက Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းများအတွက်ရှယ်ယာရှင် on ရဲ့တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံး 1993 ကတည်းကခွင့်ပြုခဲ့ပြီ။
• ဒီထက်ဗျူရိုကရေစီ: ဝေးလျော့နည်းအနီရောင်တိပ်နဲ့ ဗျူရိုကရေစီစာရွက်စာတမ်းဗြိတိသျှသို့မဟုတ် Irish ဥပဒေရေးရာစနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
• ဒီထက်တင်ခဲ့သောလိုအပ်ချက်များ: က Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းအစိုးရကိုစာရင်းကိုင်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးအနှစ်ချုပ်များမဆိုအမျိုးအစား file မှမရှိကြပါဘူး။
• သာလွန်လုပ်သား: က Man ရဲ့လုပ်သားအင်အား၏ကျွန်းကောင်းစွာပညာတတ်များနှင့်မြင့်မားသောကျွမ်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
က Man ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်အားအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကျွန်းထူးခြားတဲ့နှင့်အခြားကျွန်းက Man ၏ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့နာမညျကိုဆင်တူမရဖြစ်ရပါမည်။ အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့နာမညျကိုမဆိုဘာသာစကားတွင်ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်အားအစိုးရသို့မဟုတ်တော်ဝင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးဆိုလိုလို့မရပါဘူး။
နောက်ထပ်လိုအပ်ချက် Multi-အမျိုးသားရေးရှိနေခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအရင်းအနှီးခဲ့ရသည်ကော်ပိုရိတ်များ၏အမည်များ "ဥရောပ" သို့မဟုတ် "အင်တာနေရှင်နယ်" ကဲ့သို့စကားများပါဝင်အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရယူရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ထို့အပြင် "ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်" ကဲ့သို့စကားများအသုံးပြုမှုများအတွက်အစိုးရခွင့်ပြုချက်ခုနှစ်တွင် "Trust မှ", "ဂေါပက", "အုပ်စု" သို့မဟုတ် "Holdings က" လိုအပ်သည်။
အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကော်ပိုရိတ်နာမ၌ထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူသင့်လျော်သောအစိုးရလိုင်စင်ရယူရမယ်များကိုရှာကြံကော်ပိုရေးရှင်းပါဝင်သောအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်: "ဘဏ်", "ချေးငွေများ", "ငွေစု", "အာမခံချက်", "အာမခံ", "co- စစ်ဆင်ရေး "," အဆောက်အဦလူ့အဖွဲ့အစည်း "," ကုန်သည်ကြီးများ "," ကောင်စီ "," ယုံကြည်မှု "," ဘဏ္ဍာရေး "နှင့်" စည်ပင်သာယာ "သို့မဟုတ်မိမိတို့၏နိုင်ငံခြားဘာသာစကား equivalents ။
က Man ကော်ပိုရေးရှင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကျွန်းဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရှိရမည်။ ဒေသခံမှတ်ပုံတင်ရုံးအရာရှိတဦးကဖြစ်စဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များအဘို့ဖြစ်၏။ ကော်ပိုရေးရှင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိကရုံးလိပ်စာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်က Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်နိမ့်ဆုံးတစ်ခုတည်းရှယ်ယာလိုအပ်ချက်တစ်သုညတန်းတူတန်ဖိုးကိုရှိနိုင်ပါသည်။
တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်နိမ့်ဆုံးက Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းဘို့လိုအပ်ပါသည်, နှင့်တာဝန်ပေးအပ်ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးကျွန်းက Man ၏နေထိုင်သူဖြစ်မရှိပါ။ သို့သော်ကော်ပိုရေးရှင်းတဦးတည်းနေထိုင်သူကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးကိုခနျ့အပျရမယျ။ တစ်မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာရှိခြင်းမရှိသောလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ ချိန်းချက်သောဒါရိုက်တာနှင့်အတွင်းရေးမှူးနှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရပါမည်။
တစ်ဦးကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်ရှိပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှစ်ခုသာ£ 1.00 ရှယ်ယာထုတ်ဝေထားသည်။ ရရှိနိုင်အများဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်£ 2,000 ဖြစ်ပါတယ်။
က Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်ကြပါဘူး။ သူတို့မြေနှင့်စစ်မှန်သောအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်လျှင်သို့သော်ထုတ်လုပ်ပြီးဝင်ငွေတစ်ဦး 10% နှုန်းအခွန်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်သက်တမ်းတိုးကြေးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1,050 ယူရိုဖြစ်ကြသည်။
အများပြည်သူမှတ်တမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်က Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းနှင့်စပ်လျဉ်းတစ်ခုတည်းသောသတင်းအချက်အလက်ရုံးလိပ်စာနှင့်ဒါရိုက်တာများများ၏အမည်များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ကော်ပိုရေးရှင်း privacy ကိုများအတွက်ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများကိုခနျ့အပျနိုငျသညျ။
က Man ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကျွန်းမျှအခွန်အကြွေးနေကြသည်ရင်တောင်နှစ်စဉ်အခွန်ပြန် file ရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ပြန်လာ file ရမယ်စဉ်အခွန်ပြန်ပြင်ဆင်နေများအတွက်တာဝန်ဒါရိုက်တာနှင့်အတူတည်ရှိသည်။
ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းအခွန်ပုံစံများအတွက်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများပြင်ဆင်ထားရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှင့်အတူထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ပါ။ အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှစ်ခုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလျှင်ဒါ့အပြင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အကောင့်စာရင်းစစ်ဆေးကြမည်မဟုတ်:
- က၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် GBP 5.6 သန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဖြစ်၏
- က၎င်း၏လက်ကျန်ရှင်းတမ်းစုစုပေါင်းပေါင် 2.8 သန်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဖြစ်၏
- န်ထမ်းများ၏င်း၏ပျမ်းမျှအားအရေအတွက်က 50 သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါသည် ပိုနည်း.
က Man ၏ကျွန်းများတွင်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောခန့်မှန်းအချိန်ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်အားအတည်ပြုတစ်ချိန်ကရက်ပေါင်း3မှ5ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းပိုမြန်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့က Man ၏ကျွန်းများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
က Man ၏ကျွန်းတစ်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်မအခွန်ငွေ, တစ်ခုတည်းရှယ်ယာရှင်မရှိ, အနည်းငယ်မျှသာမြို့တော်, privacy ကိုအဘို့အဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ပေးရန် option များနှင့်လျော့နည်းစာရွက်စာတမ်းအပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသူတို့ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်းတစ်ဦးထက်သာလွန်လုပ်သားအင်အားပေးထားပါတယ်။